Mpandraharaha Sinoa : Vonona hampiasa vola eto Madagasikara -
AccueilSongandinaMpandraharaha Sinoa : Vonona hampiasa vola eto Madagasikara
Mpandraharaha Sinoa : Vonona hampiasa vola eto Madagasikara
01/08/2017 admintriatra Songandina 0
Ankoatra ny fifandraisana ara-toekarena, mivelatra amin’ny sehatra hafa ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny firenena Sinoa. Mandalo eto amintsika ary hanolotra finamanana amintsika ny fikambanana Sinoa ho an’ny finamanana amin’ny any ivelany na ny « Association du peuple Chinois pour l’amitié avec l’étranger ». Noraisin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavaloha, omaly, ny filoha lefitr’io fikambanana io, Ramatoa Lin Yi. Anton-dian’izy ireo ny hametraka ny finamanana eo amin’ny Sinoa sy ny Malagasy. Natsidiky ny Filoham-pirenena tamin’izany fihaonana izany ny hametrahana ny fifanarahana eo amin’io fikambanana io sy ny ministera misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena anio. Hisy ihany koa ny fikarakarana atrikasa eo amin’ireo tetikasa mety hotanterahina amin’izany.
Amin’ny maha-fikambanana momba ny fifandraisana azy, mifampiraharaha amin’ireo vahoaka maneran-tany ny fikambanana ary amin’izao fotoana dia ny vahoaka malagasy no tian’izy ireo hinamanana sy hahazo tombontsoa mivantana amin’ireo tetikasa hotanterahiny. Anisan’ny anton-dian’ireo delegasiona avy amin’io fikambanana io ny hametrahana fifanarahana amin’ny tokony hisian’ny fampiofanana eo amin’ireo mpisehatra malagasy eo amin’ny fambolena sy ny jono hanampiana azy ireo hanana traikefa sy hanatsarana ny vokatra.
Maro ny fanehoan-kevitra azo teto amin’ny gazety Triatra nandritra iny faran’ny herinandro iny, mikasika ny lahatsoratra nivoaka ny sabotsy lasa teo, izay namaky bantsilana ny fahitan’ny mpanao gazety ny zava-misy amin’izao fotoana. Ho tohin’izany fanehoan-kevitra ...Tohiny